कपाल कसरी दान गर्ने | स्टाइलिश पुरुषहरू
एलिसिया टोमेरो | 07/01/2022 15:00 | व्यक्तिगत हेरचाह
पक्कै एक पटक भन्दा बढी तपाईंले सोच्नुभएको छ कसरी कपाल दान गर्ने। सामान्यतया धेरै मानिसहरू आफ्नो छवि परिवर्तन गर्न चाहन्छन् र आफ्नो कपाल को एक राम्रो अनुपात काट्ने सोच्दै छन्। यदि तपाईंले यो रणनीति पहिले कहिल्यै पत्ता लगाउनुभएको छैन भने, त्यहाँ राम्रो सम्झौता छ कपाल सङ्कलन गर्ने केन्द्रहरू जुन तपाईं दान गर्न चाहनुहुन्छ, विशेष गरी स्पेनमा लगभग 2000 कपाल केन्द्रहरू छन् जहाँ तपाईं आफ्नो कपाल लगाउन सक्नुहुन्छ।
अर्को, हामी तपाईंलाई ती सबै कदमहरू चाल्नको लागि जान्न आवश्यक पर्ने सबै चीजहरूको कुञ्जी दिन्छौं कसरी कपाल दान गर्ने, कति सेन्टिमिटर आवश्यक छ, यदि यो रंग्नु पर्छ वा छैन, वा तपाइँले कपाललाई कसरी जोगाउनु पर्छ ताकि यसले कुनै झट्का नपरोस्।
1 कपाल किन दान गर्ने ?
2 कपाल दान गर्न आवश्यकताहरू
3 दानको लागि कपाल तयार गर्नुहोस्
कपाल किन दान गर्ने ?
यी अधिकांश कपाल दान सङ्कलन केन्द्रहरू विशेष छन् विगहरू पुनर्निर्माण गर्दै प्राकृतिक कपालबाट। यस तरीकाले तिनीहरू आवश्यक व्यक्तिहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, विशेष गरी जो क्यान्सर भएको छ वा एलोपेसियाबाट पीडित हुनुहुन्छ। नबिर्सनुहोस् कि विग लगाउन सक्षम हुनुको तथ्यले धेरै बल र आशा सिर्जना गर्दछ, जब तपाईंले महत्त्वपूर्ण कपाल झर्नु भएको छ।
यो महत्वपूर्ण छ केन्द्रहरू थाहा छ यो दान कहाँ गर्न गइरहेको छ र यो कहाँ पठाइँदैछ सहज र विश्वस्त महसुस गर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने, त्यहाँ केन्द्रहरू पनि छन् प्रयोग गरिएको wigs सङ्कलन क्यान्सर भएको बेला केमोथेरापी उपचारको क्रममा। तिनीहरूले स्वीकार गर्नेछन् र यसको राम्रो अवस्थालाई नवीकरण गर्नेछन् जसले यसलाई आवश्यक पर्नेहरूलाई फेरि दान गर्नेछन्। मार्फत यो लिङ्क तपाईं फेला पार्न सक्नुहुन्छ एकता हेयरड्रेसरहरू जहाँ तिनीहरूले यो संग्रह गर्छन्।
प्रविष्टिको रूपमा त्यहाँ महिला र पुरुषहरू छन् जो आफ्नो कपाल दान गर्न चाहन्छन् परिवार र साथीहरूलाई एकताबाट बाहिर। त्यसो गर्नुको तथ्यले त्यो समर्थनलाई धेरै नजिकबाट महसुस गराउँदछ र यो गर्नको लागि कुनै पनि खर्च लाग्दैन।
कपाल दान गर्न आवश्यकताहरू
कपाल पूर्णतया स्वस्थ हुनुपर्छ र यसको लागि यो आवश्यक छ रङ वा अन्य कुनै उपचारबाट मुक्त हुनुहोस् जहाँ रसायनहरू प्रयोग गरिएको छ, जस्तै पर्म, हाइलाइटहरू, कर्लहरू, हाइलाइटहरू, र यहाँसम्म कि हेन्ना पनि।
कतिपय ठाउँहरूमा तिनीहरूले रङहरू अनुमति दिन्छन्, तर कपाल धेरै स्वस्थ हुनुपर्छ वा यो केन्द्रको एक विशेष मानक हुनुपर्छ। सम्भव भएमा तहमा काट्नु पर्दैन, किनकि यसले आवश्यक लम्बाइ राख्न सक्दैन।
नाबालिगहरूले कपाल दान गर्न सक्छन् र वृद्ध मानिसहरूको हकमा यसमा 5% भन्दा बढी खैरो कपाल हुन सक्दैन। कपाल को लम्बाई 25 सेमी भन्दा बढी हुनुपर्छ, केही केन्द्रहरूमा तिनीहरूले 30 सेन्टिमिटरसम्मको लागि सोध्छन्, यो न्यूनतम आवश्यक छ विग बनाउन। घुम्ने कपाल पनि दान गर्न सकिन्छ, तर यो कम्तिमा 25 इन्च लामो हुनुपर्छ।
डरलाग्दो कपाल दान गर्न सकिँदैन, वा विस्तारहरू पुन: दान गर्नुहोस्। द कपाल पूरै सीधा हुनुपर्छ र काटिसके पछि यसलाई बलियो रूपमा बाँध्नु पर्छ, धेरै कपालहरू बीच वा एक चोटी को रूप मा।
दानको लागि कपाल तयार गर्नुहोस्
कपाल हुनुपर्छ पूर्ण रूपमा सफा। तपाईंले राम्ररी धुनुपर्छ र कपाललाई राम्रोसँग कुल्ला गर्नुपर्छ। तपाईंले हेयरस्प्रे, जेल वा कुनै कपाल फिक्सेटिभ जस्ता उत्पादनहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। यो कपाल महत्त्वपूर्ण छ काट्नु अघि पूर्ण रूपमा सुख्खा छ र यसको सम्बन्धित झोलामा राख्नुहोस्, किनकि यो मोटो वा कमजोर हुन सक्छ।
यो कट बनाउनको लागि कपाललाई कपालको टाईले बाँध्नु राम्रो हुन्छ पोनीटेल बनाउनुहोस् nape बाट राम्रो समर्थन। यदि त्यहाँ 30 सेन्टिमिटर बनाउने तारहरू छन् तिनीहरूलाई बाँध्नु र तिनीहरूलाई काट्नु राम्रो छ। त्यहाँ व्यक्तिहरू छन् जसले शासक प्रयोग गरेर सही काट्न र कपाल राम्रोसँग काट्नको लागि मापन गर्न सक्षम हुन्छन्।
पछि व्यावसायिक कट प्राप्त गर्न कपालमा यो काट्नु राम्रो हुन्छ। कैंचीमा आफ्नो हात राख्नु अघि तपाईंले गर्नुपर्छ कट को प्रकार मनमा राख्नुहोस् त्यो क्षणको सदुपयोग गर्न तपाईं के गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
त्यहाँ छ कपाल झोलामा हालेर, या त प्लास्टिक वा कागज ताकि यसलाई यसको संरचना परिमार्जन नगरी ढुवानी गर्न सकिन्छ। यो पनि हुनुपर्छ तिनीहरूको सम्बन्धित gummies संग राम्रोसँग बाँधिएको र प्रत्येक छेउमा, ताकि त्यहाँ कुनै खुल्ला कपाल छैन। प्याकेजिङ्ग र ढुवानी लागि निर्देशन धेरै सरल छन्। फारम भर्न र प्याकेज प्रमाणित गर्न नबिर्सनुहोस्।
स्पेनमा सङ्कलन बिन्दुहरू छन् Mechones Solidarios जस्तै, जहाँ धेरै कपालहरू धेरै शहर र शहरहरूमा वितरण गरिन्छ। यी साइटहरूमा तपाईंले आफ्नो कपाल दान गर्न सक्नुहुन्छ र प्रतिपूर्तिको5यूरो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, साथै तिनीहरू ढुवानी गर्ने जिम्मेवारीमा हुनेछन्। यी संघहरूले प्राप्त गर्छन् हरेक दिन सयौं पिगटेलहरू र तिनीहरू लाभ बिना यो गर्छन्। पछि यो कपालको साथ विगहरू बनाउने विचार छ, त्यसैले तिनीहरूलाई एकल विग बनाउन 8 भन्दा बढी पिगटेलहरू चाहिन्छ। यदि तपाइँ उत्साहित हुनुहुन्छ भने, तपाइँको कपाललाई आवश्यक पर्ने सबै व्यक्तिहरूको लागि उत्तम स्वागत हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » व्यक्तिगत हेरचाह » कपाल कसरी दान गर्ने